Xisbigee ayay dan ugu jirtaa dib u dhigidda doorashada Nigeria? - BBC News Somali
Xisbigee ayay dan ugu jirtaa dib u dhigidda doorashada Nigeria?
Doorashada Nigeria ayay ahayd in ay qabsoonto Sabtidii aanu soo dhaafnay
Dalka Nigeria ayaa waxaa Sabtida lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada madaxwaynanimada iyo baarlamaanka .
Doorashadan oo lagu waday inay dhacdo Sabtidii aanu soo dhaafnay ayay dib u dhigeen guddiga doorashada.
Dib u dhigadda doorashada iyada oo ay ka harsanayd muddo saacaado ah ayaa ka yaabisay dadka reer Nigeria oo meelo kala duwan u safray si ay codkooda u dhiibtaan.
Waxay dib u dhigidda doorashada ay sidoo kale sababtay in dhaqaala dhan $1.5bilyan ay ku lunto sida ay sheegeen golaha ganacsiga iyo warshadaha Lagos.
Guddiga doorashada Nigeria ee loo soo gaabiyo (Inec) ayaa dhowr arrimood sabab uga dhigay dib u dhigidda doorashada,waxaana ka mid ah arrimo tasiilaad iyo cimilada oo aad u xumayd oo qalabkii doorashada la gaarsiin waayay goobihii loogu talagalay.
Tirada codbixiyayaasha goobaha codeynta iyo musharaxiinta
84 milyan oo qof ayaa isu diiwaangaliyay in doorashada ay ka qayb qaataan.
51% ka mid ah codbixiyayaashan ayaa waxay da'dooda ka hooseysaa 35
Waxaa doorashada ka qayb qaadanaya 73 musharax madaxwayne
Waxa ay dadka codadkooda ka dhiiban doonaan 120,000 ah goobaha codeynta
Xisbiga haya talada dalkaasi ee All Progressives Congress (APC) iyo xisbig ugu wayn mucaaradka ee,the People's Democratic Party (PDP),ayaa waxay labaduba cambaareeyeen dib u dhigidda doorashada.
Dib u dhaca doorashada yey dan ugu jirtaa?
Bayaan la soo saaray maalinkii doorashada dib loo dhigay ayaa xisbiga APC waxay sheegeen in xisbiga PDP ay doonayeen in doorashada dib loo dhigo si ay u yaraato fursadda musharaxooda madaxwayne Muxammadu Buhari.
Xisbiga PDP, oo musharaxooda madaxwaynaha uu yahay Atiku Abubakar, ayaa dhankiisa sheegay in guddiga doorashada ay dib u dhigeen doorashada "si ay u abuuraan fursad ay ugu shaqayn karto qorshahooda ku shubashada doorashada ".
Madaxwayne Muxammadu Buhari (Bidix ) iyo mushraxa mucaaradka ugu cadcad Atiku Abubakar
Sida ay aaminsan tahay Idayat Hassan,oo ka tirsan xarunta dimuqraadiyada iyo hormarka ee Abuja in dib u dhigidda doorashada ay tahay mid looga gol leeyahay in galaangal loogu yeesho natiijada doorashada.
Waxa ay isbarbardhig ku samaysay dib u dhicii doorashadii 2015 markaasi oo xisbiga PDP - oo xilka hayay ay doorashada 6 toddobaad dib u dhigeen sababo la xiriiray kooxda Boko Haram.
Dib u dhigidaasi ayay sheegtay Idyat in ay keentay in xisbiga APC ay gacanta sare yeeshaan.
Idayat Hassan waxay rumaysan tahay in dib u dhaca ku yimid doorashada sanadkan ay fursad siinayso xisbiga APC maadaama ay sare u qaadayso fursadda ah in codbixiyayaal badan aysan u soo bixin doorashada.
Waxa ay intaa ku dartay in laga yaabo in ay hoos u dhacdo tirada goobaha taariikh ahaan ay dadka sida wayn ugu soo baxaan doorashada ee waqooyi galbeed iyo waqooyi bari oo ay ku xooggan yihiin taageerayaasha Madaxwayne Muxammadu Buhari.
Dadka kale ee faaqida siyaasadda Nigeria ayaa waxay rumaysan yihiin in dib u dhigidda doorashada ay dhaawac isku mid ah u gaysanayso labada xisbiba maadaama taageerayaashooda oo u safray goobaha codeynta aysan mar kale safarkaasi gali Karin.